De De Beauty Salon ရဲ့ တာဝန်ရှိသူနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း | yathar Magazine
Question : မင်္ဂလာပါခင်ဗျ ။ အမရဲ့ အကြောင်းလေး မိတ်ဆက်ပေးပါဦး ?
Answer : အမ နာမည်ကတော့ မိုင်းစု လို့ခေါ်ပါတယ် ။ အမ လက်ရှိမှာတော့ De De Beauty Salon ရဲ့ တာဝန်ခံ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရော ၊ Hair Designer တစ်ယောက် အနေနဲ့ပါ တာဝန်ယူထားပါတယ် ။
Question : ဒီ Beauty Salon ရဲ့ အကြောင်းလေး မိတ်ဆက်ပေးပါဦး ။
Answer :De De Beauty Salon ကို ဖွင့်လှစ်ထားတာကတော့ အချိန်အားဖြင့် ၄ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ ။ အရင်ကတော့ ကမာရွတ်ဘက်မှာ ဖွင့်ခဲ့သေးတယ် ၊ အခု ဒီမှာဖွင့်တာကတော့ ၂ နှစ်လောက် ရှိပြီ ။
Question : De De Beauty Salon မှာ လက်ရှိဝန်ဆောင်မှု ပေးနေတဲ့ Beauty Service လေးတွေ အကြောင်းပြောပြပေးလို့ ရမလား ?
Answer : ဒီမှာတော့ မျက်နှာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Face cleaning အပါအဝင် Makeup Service တွေလည်းရနိုင်ပါတယ် ။ Hair ဆံပင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Beauty Service အစုံအလင် ကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ် ။ မျက်ခုံး Tattoo ထိုးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလည်း ရနိုင်ပါတယ် ။
Question : အမ တို့ Salon မှာ Customers တွေ အများဆုံးပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုက ဘာများလဲ ?
Answer : ဒီမှာတော့ အများအားဖြင့် Customers တွေက Rebound, Digital Wave , Hair Straight စတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပိုလုပ်ဖြစ်ပါတယ် ။
Question : Trend ဖြစ်နေတဲ့ Hairstyle တွေကို Customers တွေ အတွက် ဘယ်လို ပြင်ဆင်ပေးတတ်ပါသလဲ ?
Answer : Online ပေါ်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Trend Hair Style တွေကို Social Media ကနေရော ၊ အပြင်လက်တွေ့ကနေပါ လေ့လာပြီး Customers တွေ စိတ်ကြိုက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးပါတယ် ။
Question :De De Beauty Salon ကို လာမယ့် Customers တွေအတွက် ဖိတ်ခေါ်စကားလေး ပြောပေးပါဦး ။
Answer : ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် ၊ De De Beauty Salon မှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ Hair Designers တွေက ခေတ်မှီစက်ပစ္စည်း၊ အလှကုန်ကြမ်းအကောင်းဆုံးတွေနဲ့ Customers တွေကို စိတ်တိုင်ကျ အလှဆုံးဖြစ်အောင် နွေးထွေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတာမို့ လှမ်းလာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ ။